Maanta waxaan la hadlayey nin ay wada shaqeeyaan Paul Chaney wuxuuna ila wadaagay aalad cusub, Soundtrap. Soundtrap waa barxad online ah oo loogu talagalay tafatirka, isku darka, iyo ka wada shaqeynta maqalka - ha ahaato muusig, sheeko sheeko, ama nooc kasta oo duubitaan maqal ah.
Wax ka beddel qoraalkaaga qoraal ahaan - Barxadda 'Soundtrap desktop desktop' waxay leedahay tifaftire heer sare ah laakiin waxay ku darsadeen qoraal otomaatig ah - muuqaal xariif ah si ay xitaa ugu fududaato wax ka beddelka boodhadhkaaga sida aad dukuminti qoraal ah u samayn lahayd
Martiqaad oo duub martida podcast-ka - Sababtoo ah wadashaqeyntu waxay fure u ahayd markii la qorsheynayay Soundtrap, waxaad si fudud ugu marti qaadi kartaa martidaada fadhi duubasho adigoo u diraya xiriiriye. Markay soo galaan, waad ka caawin kartaa dejinta codkooda duubistu way bilaaban kartaa! Uma baahna inay isdiiwaangeliyaan si loo casuumo.